Ifulethi likaHelga's Lovely Seaview
Vlorë, Qarku i Vlorës, i-Albania
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Helga
I-Helga's Lovely Seaview Apartment iyisakhiwo sesimanje esimaphakathi nedolobha, eduze nolwandle kanye nokuzola.Iyifulethi elisha sha, yesimanjemanje futhi ethokomele.Amabhishi anesihlabathi, ulwandle nakho konke okunye njengezindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, amabha. itholakala phakathi 2minutes walk.Itholakala at the Lungomare appartments.
Indawo ethokomele kakhulu futhi enethezekile. Ihlanganisa igumbi lokuphumula elikhulu elinekhishi elihlome ngokuphelele, imibhede kanye nendawo yabantu abangu-6, igumbi lokugezela lesimanjemanje kanye ne-balcony enkulu whwrw ungakwazi ukujabulela ikhofi ekuseni, noma ingilazi yewayini kusihlwa. Ngesikhathi sokuhlala kwakho kungenzeka ukuthi usebenzise mahhala indawo yokupaka ngaphansi kwesakhiwo.
-7*Helga'sDeluxe 3 Ifulethi
kanye nenye inketho e-Vlora (Albania)
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-5, 1 usofa
Leli fulethi livala zonke izitolo ongazidinga. Kunesuphamakethe esitezi esitezi, ikhemisi elibhekene nomgwaqo, amabha esitezi esingezansi, abalungisa izinwele isitobhi sebhasi 2 min walk👌👌
UHelga Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Vlorë namaphethelo